Sele sizazi iinkcukacha zokuqala malunga neKirin 985 | I-Androidsis
Isiphelo esiphakamileyo sikaHuawei, njengoluhlu lwe-P30, sebenzisa iKirin 980 njengeprosesa. Uphawu lwesiTshayina lwenziwa kunyaka ophelileyo iprosesa entsha yokuphela kwayo. Iprosesa eya kuthi kungekudala ibe nendlalifa, yintoni ikirin 985. Le modeli intsha kufuneka ibonise inkqubela phambili enayo uphawu lwesiTshayina kwicandelo labaprosesa.
Iinkcukacha zokuqala malunga nale Kirin 985 sele zichaziwe. Ukuze sikwazi ukufumana umbono wento uHuawei asilungiselele yona kule processor. Imodeli ekufanele ukuba sele ifikile kwiHuawei Mate 30 ekwindla yalo nyaka.
IHuawei iphucule iiprosesa zayo ngokumangalisayo ekuhambeni kwexesha. Le yinto eza kubonakala kwiKirin 985. Kule modeli intsha kulindelwe amandla amakhulu. Ngapha koko, ezi ngxelo zangaphambili zibanga oko inganikezela nge-20% yokusebenza ngakumbi kunangaphambili. Ke siyayibona inkqubela enjalo.
Njengonyaka ophelileyo, iprosesa iyakwenziwa kwinkqubo ye-7nm. Nangona kule meko kulindeleke ukuba kusetyenziswe inkqubo ye-EUV (Extreme Ultraviolet Lithography). Oku kunceda ekwenzeni imveliso yakho ichaneke ngakumbi, eya kuthi incede ukunciphisa ixesha lakho lokuvelisa, kunye neendleko zakho.
I-TSMC iya kuphinda ilawule imveliso ye-Kirin 985, njengoko kuyakwenzeka nge-processor yangaphambili ye-Huawei. Ukubona iziphumo ezilungileyo ezifunyenwe kunyaka ophelileyo, sifuna ukugcina oku kwesi sihlandlo. Ngapha koko, kulindeleke ukuba Sifumana okwahlukileyo nge5G efanayo.
Nangona le ayisiyonto iqinisekisiweyo. Nangona kulindeleke ukuba ibe njalo, kuthathelwa ingqalelo ukuba uphawu sele lusebenza kwiifowuni nge5G. Kodwa ngokuqinisekileyo Siza kwazi ukuba iKirin 985 ifika ne5G ngokwendalo, okanye ukubakho kokuhambelana nemodem kuya kongezwa, NjengoBalong 5000.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » I-Kirin 985 Iinkcukacha zokuqala zityhilwe